Daryeelka Ka Hortagga ah - Waa maxay sababta aan u daryeelo? - Website-ka rasmiga ah ee CHPW Boloogga rasmiga ah ee CHPW | Awooda bulshada Barta rasmiga ah ee CHPW
Caafimaadka & Fayaqabka | Abriil 4th, 2022
La dhajiyay Abriil 4th, 2022 - Waqtiga Akhriska: 2 Daqiiqad / s
Sida maahmaahda aan wakhtigoodu dhicin ee tidhaahdo, "Wax ka mid ah ka-hortagga ayaa qiimihiisu yahay rodol dawo ah." Markaa haddii aad iska joojinaysay daryeelka ka hortagga caadiga ah oo aad ku talinaysay baadhis caafimaad muddada dheer ee COVID-19 masiibada, hadda waa wakhti fiican oo aad dib ugu soo laaban lahayd jidka.
Nidaamkeena caafimaad maaha mid sii culus oo xannibaado badan oo COVID ah ayaa hadda la qaaday, markaa waa inaad awood u yeelataa inaad samaysato ballantaada. Ha sugin, sababtoo ah baaritaanka caafimaadka ee ka hortagga ah ayaa badbaadiya nolosha!
Waa maxay daryeelka ka hortagga?
"Kahortag" macnaheedu waa inaad hesho daryeelka caafimaadka aad u baahan tahay ka hor intaadan dhibaato kugu dhicin. Ka fakar sidan: Way fududahay inaad si taxadar leh u dhigto muraayadda shelf halkii aad ka nadiifin lahayd jajabyada jajaban ka dib marka ay ku dhacdo dhulka. Jidhkaagu waa isku si. Haddii aad hesho caafimaadkaaga waqti ka hor, waxaad badbaadin kartaa naftaada xanuun badan oo aad ka shaqeyso wadada.
Taasi waa sababta aan u leennahay baaritaanno jireed sannadle ah oo loogu talagalay carruurta waaweyn iyo dadka waaweyn iyo imtixaannada "carruurta wanaagsan" ee loo qorsheeyay carruurta.
Inta lagu jiro jirka, dhakhtarkaagu wuxuu hubinayaa inaad caafimaad qabto - iyo inaad sidaas ku sii jirto.
Taariikhda Caafimaadka: Dhakhtarkaagu wuxuu kaala hadli doonaa qaab nololeedkaaga iyo arrimo kasta oo caafimaad oo la yaqaan. Waxay ku weydiin doonaan taariikhda caafimaadka qoyskaaga iyo wixii welwel ah ee ku saabsan caafimaadkaaga. Tani sidoo kale waa wakhti ku habboon in laga hadlo qorsheynta qoyska iyo baahiyaha kale ee gaarka ah ee laga yaabo inaad qabto.
Calaamadaha muhiimka ah: Dhakhtarkaagu wuxuu hubin doonaa miisaankaaga, neefsashadaada, heerkulkaaga, cadaadiska dhiiggaaga, iyo garaaca wadnahaaga.
Imtixaanka madaxa iyo qoorta: dheh "ah." Dhakhtarkaaga ayaa baari doona cunahaaga, sankaaga, iyo dhegahaaga iyo sidoo kale ilkahaaga iyo ciridkaaga.
Imtixaano kaleDhakhtarkaagu waxa laga yaabaa inuu eego calooshaada, falcelintaada, indhahaaga, ama maqaarkaaga. Waxaa kaloo jira baaritaanno gaar ah oo uu takhtarku sameyn doono, taasoo ku xiran da'daada iyo jinsigaaga.
Macnaha ka dambeeya baaritaanka
Marka lagu daro jirkaaga sanadlaha ah, hubi inaad la socoto baadhisyada caadiga ah ee lagu taliyay. Tijaabooyinku way kala duwan yihiin iyadoo ku xidhan da'daada iyo jinsigaaga waxayna ku jiri karaan baadhista naaska, ilmagaleenka, iyo kansarka mindhicirka.
Baadhitaanadu waxay caawiyaan in goor hore la ogaado cudurrada. Marka hore ee cudurka la helo, way fiicnaan doontaa fursadaha lagu garaaco, gaar ahaan kansarka iyo cudurrada wadnaha.
Kala hadal dhakhtarkaaga si aad u aragto baaritaanka kugu habboon oo aad iska baarto!
Haddii aad tahay xubin ka tirsan Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) oo aad rabto in lagaa caawiyo sidii aad u heli lahayd dhakhtar ama jadwalka hubinta sanadlaha ah ama baaritaanka caadiga ah, na soo wac at 1-800-440-1561 ( Isticmaalayaasha TTY, garaac 711). Waxaan halkaan joognaa 8 subaxnimo - 5 galabnimo, Isniin ilaa Jimce.
Wax badan oo ku saabsan baarista caafimaadka, akhri Guudmarka Caafimaadka iyo Caafimaadka A ilaa Z
Isticmaal sidaan Baadhitaan caafimaadkee baad u baahan tahay - qalab is dhexgal ah ka Healthwise
Ama Isticmaal Qalabka Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Maraykanka si aad u ogaato baadhisyada aad u baahan karto
« Tijaabada COVID-guriga-guriga: 5-ta Su'aalood ee ugu sarreeya ayaa laga jawaabay
5 Su'aalood oo Jerry ah »